Gaajo iyo saboolnimo baahsan oo soo foodsaartay xoolaleyda gobollada Soomaalida Kenya
Gobollada Waqootiga Kenya waxaa laga soo sheegaya abaar aad u daran, taas oo baabi'isay xoolihii, isla markaana sababatay biyo la'aan daran, waxaana qeylo-dhaan ka diray xoolaleyda iyo hey'adaha samafalka.
In ka badan 465,000 oo carruur ah oo ka yar shan sano jir iyo in ka badan 93,000 oo haween uur leh ama naas -nuujinaya ayaa nafaqo-darro ku heysaa gobolka waqooyi ee Kenya, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Xoolaleyda ayaa biyaha ugu safra meel loo socdo hal maalin, halka hoos u dhac weyni uu ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha macluul darteed, iyada oo dhinaca kalena qiimaha maciishadda ay sare u kacday.
Degmada Marsabit qiimaha cuntada ayaa kor u kacay, waxaana maciishaddu ay ka sarreeysaa celcelis ahaan 16% sida ay muujineyso xogta laga helay Maamulka Maareynta Abaaraha Qaranka (NDMA).
"Arigu, waa mid ay adagtahay in la iibsado, lo'duna way ka sii daran tahay, carruurteennuna way gaajoonayaan," ayuu yiri Moses Loloju, oo ah xoolo-dhaqato ka soo jeeda Isiolo oo iskiis isku xilqaamay si uu gacan uga geysto qaybinta deeqda raashinka ee dowladda hoose.
Waa xilli-roobaadkii labaad oo xiriir ah oo roobku aanu weli ka di'in Waqooyiga Kenya, oo ah dhul-oomane ah oo ka duwan dalka intiisa kale oo ah barwaaqo iyo cagaar badan.
Roob la’aanta ayaa la micno ah in 2.4 milyan oo qof oo ku nool gobolka ay la halgami doonaan sidii ay u heli lahaayeen cunno ku filan marka la gaaro bisha Nofembar, sida ay sheegtay Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay.
"Abaarihii hore waxay ahaayeen kuwo si weyn loo saadaalin karay, waxaan u dhexeyn jiray xilli dheer oo ila 5 ama 10 sano ah. Haddese waxaan aragnaa abaaro soo socda labadii sanaba mar, marmarka qaarna sanad walba." ayuu yiri Maurice Onyango oo ah Madaxa Gobolka ee Maareynta Khatarta Masiibooyinka ee hay'adda samafalka ee Plan International.
Heerkulka Waqooyiga Kenya ayaa sare ugu kaca 0.34 ° C tobankii sanaba mar intii u dhexeysay 1985-2015 sida ay sheegeyso xogta dowladda Mareykanka, waxaana la saadaalinayaa in shanta sano ee soo socota uu kor u sii kaco heerkulku, taas oo adkeyn doonta in dalag la beerto ama xoolaha la dhaqdo, maadama ay biyuhu si xowli ah u guri doonaan.